AgriEdge A Moroccan Agritech Start-up Na-ebunye Satellite data Maka nkenke ugbo
AgriEdge a Moroccan Agritech Start-na-ebunye Satellite Data maka nkenke Ugbo
Ofgwọ ọrụ na ị nweta oke mkpụrụ maka ndị ọrụ ugbo pere mpe yiri ka ọ dị abụọ, n'ọtụtụ banes, na-eche ihu na gburugburu usoro ọrụ ugbo na mpaghara Afrika.
Enweghị ezigbo mmụba ọ bụla na nsogbu ndị a, ọ ga-abụ ihe siri ike ịbawanye ego nke ndị na-emepụta ugbo, yabụ, ịba ụba nri ndị ahịa na-enweta ga-abụ iberibe.
Otu mmalite nke pụtara ìhè ịghọta ma na-achọ idozi ihe ịma aka a bụ, dabere na Morocco.
The mbido agritech azụlitewo nkenke ọrụ ọrụ ugbo nke nwere ike idozi isi nsogbu abụọ ekwuru na mmalite nke isiokwu a.
Mmalite na-eji ọtụtụ data, gụnyere data ihu igwe, satịlaịtị na onyogho drone, iji chọpụta ogo kachasị mma nke fatịlaịza na mmiri iji nye ihe ọkụkụ ọ bụla.
The mbido agritech na-achọ ịgbasawanye azụmahịa ya, ma n'otu oge ahụ, na-enye nkwado maka ọtụtụ ndị ọrụ ugbo, site na freemium na ọrụ adịchaghị.
Ọrụ freemium ya na-enye ndị ọrụ ugbo obere na ndị na-arụkọ ọrụ ohere ịnye atụmatụ na nlele ihe ọkụkụ dị mfe.
Ọrụ ya kachasị elu na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ gọọmentị, ndị NGO, nyiwe azụmaahịa agri na ndị ọrụ ugbo buru ibu.
Ha niile iji nye ha amụma, ezi ogbugba mmiri n'ubi na ijikwa oria osisi.
N'ihi nke a, CFAMedia nwere mkparịta ụka, ya na Faissal Sehbaoul, Onye isi njikwa, AgriEdge bụ onye kpọgara anyị na njem etu esi bido, dị ka ikpo okwu ọrụ ugbo na ahịa dijitalụ, maka ngwaahịa agro.
Dabere na Faissal, ebumnuche nke inye ndị ọrụ ugbo ikike ịmị mkpụrụ na nkwado na Africa, site na ihe ọhụrụ na dijitalụ, bụ onye ọkwọ ụgbọ ala, n'azụ ntọala AgriEdge.
"Site na mbido, AgriEdge setịpụrụ dịka ebumnuche, na -emepụta akwa n'etiti R&D dị elu n'ịkọ ugbo na ndị ọrụ ugbo, yana ịmepụta ọrụ dijitalụ emegharịrị, na ọnọdụ Africa", gbakwunyere Faissal.
Mgbe ha nọrọ afọ abụọ zuru oke na nyocha na mmepe, mgbe ha na ndị ọrụ ugbo nọkọrịtara ahụmahụ mmekọrịta, AgriEdge tinyere ọrụ ya.
Mmalite ahụ gụnyere ndị ọrụ ugbo, site na mpaghara dị iche iche na Morocco na nyocha nke ubi, iji kwado ọrụ ya na ọnọdụ dị adị.
Taa, AgriEdge nwere nyiwe abụọ - AgriEdge platform, maka agronomic iṣeduro na AgriSoo9, ahịa nke na-enye ndị ọrụ ugbo na ndị na-arụkọ ọrụ ahịa ohere igosi na ire ngwaahịa ha.
Na ndi oru ugbo nke obodo nabatara AgriSoo9, Ahia AgriEdge, karia ire n’onwe ha, Faissal kwuru, “N’iburu n’uche oge COVID-19 dị ugbu a, anyị na-enyere ndị ọrụ ugbo nọ n’ime obodo na ndị na-emekọrịta ihe aka, na-ere ngwaahịa ha, site na Digital Marketplace AgriSoo9”.
Dị ka ọ dị na kọntinent Africa, n'ịzụta ngwaahịa ego, ị na-achọkarị ịba n'ahịa ọdịnala nke nwere ike ịbụ nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ahịa ama ama.
N'oge oria ojoo Coronavirus, ihe egosiputara na otutu ndi ahia choro e-commerce, karia izu ahia n'ahịa, maka ihe nlezi anya na nchekwa.
“Uzo ahia ohuru a emetutala ndi oru ugbo na ndi na enweta ego, karisia, ndi na amaghi maka iji ahia e-commerce.
N'ihi nke a, anyị kere AgriSoo9, ahịa dijitalụ nke na-enye ndị ọrụ ugbo na ndị na-emekọrịta ọrụ aka na-egosipụta ma na-ere ngwaahịa ha, " kwusiri ike Faissal
AgriEdge bụkwa, na-eme ndị ọrụ ọ chọrọ, (ya bụ, ndị ọrụ ugbo na ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ), maara nke ọma na ngwa ọrụ a, na-ahazi oge ọzụzụ na e-commerce na ahịa dijitalụ, yana nkuzi banyere etu esi agagharị n'ime AgriSoo9.
AgriEdge's Milestone kemgbe mmalite
Dabere na Faissal, AgriEdge egosiputa ngwa ngwa ahịa na ngwa ngwa.
"Usoro anyi di iche iche nke ichikota ihe omuma ndi oru mmekorita na mmekorita na-adigide na ahia, kemgbe mmalite nke AgriEdge, na-eme ka ihe anyi mezuru".
AgriEdge dị mkpa bụ ime ka ndị ọrụ ugbo rụọ ọrụ nke ọma, jiri ngwaọrụ dijitalụ gbakọọ mmiri na fatịlaịza ha kwesịrị inye ihe ọkụkụ ha, ịkọ amụma ihe ọkụkụ ha na ire ngwaahịa ha, site n'ahịa ahịa dijitalụ anyị AgriSoo9.
"Taa, AgriEdge na-arụ ọrụ na mba 5 Africa - gụnyere Morocco na mba anọ ọzọ si West Africa - na ntụgharị nke ihe karịrị $ 200,000."
Dabere na Faissal, mmalite mmalite a na-enyere ndị ọrụ ugbo 30,000 aka, na-akwalite mkpụrụ ha ma na-ebelata ụgwọ ọrụ ha ma anyị na-achọ ịbawanye ma gbasaa ala, n'ofe Africa.
Ihe AgriEgde na-enye onye Moroccan dị na mpaghara
Ulo oru ugbo n'Africa, tinyere Morocco, ka na-eme ihe mbu, na ntinye aka na teknụzụ oru ugbo.
Biakwa obibia nke Ọrịa na-efe efe nke COVID-19 enyewo aka mee ka ụfọdụ n'ime teknụzụ ndị a dị ngwa, agbanyeghị, ndị ọrụ ugbo pere mpe, ka dịbeghị njikere itinye ego na ntanetị
“Site ahụmịhe anyị nwere n'ọhịa, ụzọ kachasị mma iji mee ka ha kwenye bụ, site n'igosipụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uru nke azịza anyị.
Maka nke a, ugbu a, anyị na-enye n'efu, ihe ngwọta anyị nye ndị ọrụ ugbo pere mpe, site na ndị ọrụ ugbo nke meghere ụzọ AgriEdge maka imekọ ihe, na Morocco na West Africa ", Faissal kwuru.
Agriedge na - agbakọta ụlọ ọrụ ego iji kesaa ọnụ ahịa ya. Mbido ahụ achọpụtakwara na ndị ọrụ ugbo ji AgriEdge Platform, na-aga n'ihu na-eji ya ma na-akpọ ndị agbata obi ha, ka ha mee.
Data Satellite AgriEdge
Banyere ọnụ ahịa nke data satịlaịtị maka ndị ọrụ ugbo mpaghara nwere ikike, Faissal kọwara,
“Otu n’ime ihe dị mkpa nke Satellite Data bụ ikike ya ikpuchi nnukwu mpaghara na otu ogbugba. Nke a na-enye teknụzụ satịlaịtị ikike ịdị mma nke ọma, na mkpa ọrụ ugbo ma na-enyere ọtụtụ ndị ọrụ ugbo agbata obi aka.
Site na nke a, ụdị azụmaahịa na-eri ọnụ, ọkachasị, maka obere ndị ọrụ ugbo n'Africa na ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-adịwanye mfe ma dị mfe itinye ya n'ọrụ ”,
Site na ọganihu ugbu a na teknụzụ satellite, ihe ọhụrụ ọgbọ nke Satellites, na-agbagharị ụwa ugbu a, na-etinye ihe mmetụta sensọ na-enwe ike ijide data, site na nke a, enwere ike ịpụta ọtụtụ nghọta, iji nyere ndị ọrụ ugbo obodo ahụ aka ito ma rụpụta ihe na-adịgide adịgide, karia.
Ọzọkwa, site na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke Satellites gburugburu ụwa, ọ ga-ekwe omume, iji nyochaa uto ihe ọkụkụ na-aga n'ihu, nke na-enye ohere ịme mkpebi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị, ọkachasị, na ọgba aghara ihu igwe dị ugbu a.
Banyere ụbọchị nchịkọta Agri
Kwa afọ, AgriEdge na-ahazi Agri Analytics Days, (AAD), mmemme sayensị mba ụwa.
Ihe omume a na - achikota ndi okacha amara na Digital Agriculture, site na mpaghara di iche iche, iji kparita oganihu di na Digital Technologies Technologies, site na ezigbo ihe omumu.
Ederede nke ikpeazụ gosipụtara otu ụbọchị, nke a na-akpọ Daybọchị Ndị Ọrụ Ugbo, iji nye ndị ọrụ ugbo obere, na-abịa site n'ofe Morocco, ka ha gosipụta ojiji nke ngwọta dijitalụ, n'ihu ndị juri nke ndị ọkachamara mba ụwa, nke a kpọrọ ka AAD.
E nyere ndị ọrụ ugbo atọ nke dijitalụ akara, “Ndị Ọrụ Ugbo”.
AAD na-ekwe ka AgriEdge weta ahụmịhe mba ụwa na gburugburu Africa. Ọ na - enyere ndị ọrụ AgriEdge aka, ka ha dị ọhụrụ, yana ụzọ ọhụụ.
Mbipụta ọzọ nke AAD ga-eme na Machị 2021, na Morocco.
"N'afọ ndị na-abịanụ, anyị na-ahụ AgriEdge, ikpo okwu dijitalụ nke jikọtara usoro agri-uru ma jiri ya, site na ngalaba dị iche iche agri-stakeholder, gafee Africa", Faissal kwubiri.
Ihe osise gosipụtara: Faissal Sehbaoul, Onye isi nchịkwa, AgriEdge
You nwere akụkọ kwesịrị ka egosi ya? Nweta kọntaktị site na ozi [na] cfamedia.com.ng